Mawiricheya muSebastian, FL | KarmanHealthcare.com
Karman Healthcare inopa vashandisi ne lightweight mavhiripu uye zvekurapa mu [peji_musoro] nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza. Tine nzvimbo zhinji dzechitoro dzepamutemo mukati meNew York dzinogona kukupa iwe kufamba zvishandiso nebasa.
Florida's State Parks yakazvipira kupa kufambidzana zvivakwa, zviitiko uye zvirongwa kune vese vashanyi. Nezve zviyero uye zvirevo maererano nekushandiswa kwe mavhiripu, zvine simba-zvine simba kufamba aids uye nezvimwe zvinofambiswa nesimba kufamba zvishandiso (OPDMD) nevanhu vane kufamba kukanganiswa mukati memapaki ehurumende, ndapota tinya pane yakakodzera chinongedzo pazasi, kana kupuruzira pasi kuchikamu chakakodzera. Kuti uwane yekuwedzera nzira kumigwagwa nemabhishi, ese-terrain mavhiripu, kusanganisira kumahombekombe mavhiripu inowanikwa mumapaki mudunhu rese. wiricheya malifti anopihwa kuBoca Grande Lighthouse kuGasparilla Island State Park uye Eden Gardens State Park. Vaturikiri vemutauro wemasaini vanogona kupihwa ziviso yepamusoro kushandisa Fomu Rokukumbira Pokugara. Uye zvakare, mapaki mazhinji ane mapurogiramu evhidhiyo anopa vhezheni-yakavhurika vhezheni pamwe nemakopi akanyorwa emapurogiramu eodhiyo.
Scooter /wiricheya Rental
Kuchengeta Mushonga Midziyo, Orlando: wiricheya uye kukwereta scooter, oxygen, mimwe michina yekurapa. 800-741-2282, 407-856-2273, www.caremedicalequipment.com
Tarisa bhuku reDisney reVashanyi vane Kuremara kuti uwane ruzivo nezve wiricheya kuwana zvinokwezva, kana kutarisa neanotasva muenzi kana muenzi. Zvakawanda zvinokwezva ndizvo kufambidzana kune vashanyi vanogona kusimudzwa kubva kumacheya nerubatsiro kubva kunhengo yepati yavo. Vazhinji vanogona kugashira vaenzi vanofanirwa kugara mukati mavo mavhiripu.
SeaWorld Orlando inopa zvigaro zvakakosha munzvimbo dzese dzemitambo uye nhandare dzinoverengeka dzine masuo akakosha. Vaenzi vane imbwa dzinotungamira vanofanirwa kushandisa maitiro akafanana neaya wiricheya vaenzi. Mvura inowanikwa kune imbwa dzinofambidzana chero paresitorendi nzvimbo.
Unogona kutora kopi yeBhuku reNhungamiro yeVashanyi Vakaremara ku wiricheya nzvimbo dzekurenda mupaki yega yega. Kuti uwane kopi pamberi, shanyira webhusaiti yeWDW pawww.kanoita.com kana kunyorera ku: Walt Disney World Guest Communications, Bhokisi 10000, Lake Buena Vista, FL 32830.
Chiito Kuremara Zviwanikwa - Jacksonville wiricheya kufambidzana rendi mini-vans nezuva, vhiki, kana mwedzi. (Mutero Mahara: 1-888-316-2648)
Chimwe nechimwe chedu chinokwezva chakagadzirirwa kupa kunakidza kune wese munhu, nevashandi vane hunyanzvi hwekuenderera mberi nekubatsira vashanyi nazvo kufamba kuremara; mazhinji akagadzirwa ne wiricheya-kupinda mukati kana magedhi epamberi kuitira nyore kupinda.
State uye mapaki emumvura mukati meKeyi kupa wiricheya-kufambidzana nzira dzekuona shiri, uye girazi-pasi, snorkel uye kudhiraina zvikepe, uye mahombekombe mavhiripu yevaenzi, kusanganisira Curry Hammock State Park, Bahia Honda State Park uye John Pennekamp Coral Reef State Park. Kana zvichikwanisika, vashanyi vanofanirwa kutaura nepaki yega kuti vawane kana kuita chikumbiro pamhepo pa http://www.floridastateparks.org/ADA/RequestAccomodation.cfmusati washanya, kungo tarisira kuti pekugara uye / kana zvishandiso zvichawanikwa zvirinani paunosvika.
Veruzhinji, nzvimbo dzemitambo mukati meMakiyi ese ADA-kufambidzana, uine wiricheya-kufambidzana zvigaro, pamwe nekupaka kwakanaka uye ramp kune vanhu vakaremara.
Kiyi West Taxi Matanhatu inopa Para Transit tekisi iyo inogona kugara zvese zviri zviviri zvemanyore kana zvemagetsi mavhiripu. Vatakuri vana vane vaviri mavhiripu, kana vashanu vafambi nemumwe wiricheya unogona kuchovha zvakanaka. Vanopa zvemuno kutakura pamwe nekuenda kwese kuFlorida Keys.
Zvekutenderera kuchitsuwa (s), veruzhinji uye kutenderera kutakura ne wiricheya kuwana kunowanikwa, senge Conch Kushanya Chitima uye Kiyi West Trolley Kushanya. Guta reKiyi West rinopawo kufambidzana yeruzhinji bhazi. Click pano yehurongwa uye nerumwe ruzivo.
Zverwendo rwekare runonakidza uye rwakasarudzika, rwendo rwekufambisa ngarava pakati peKey West kusvika Sunset Kiyi uye kushanya kwezuva ku Yakaoma Tortugas mumwe nemumwe wiricheya-kufambidzana.
Inokurudzirwa kufamba neyako kana rent kana kuunza inodonha wiricheya, kuve nechokwadi chekuwanika panguva yekugara kwako pamwe neye nyore trunk stowage uchityaira uchitenderera zviwi.